Shily: Misy Fiantraikany Amin’ny Fiveloman’ireo Mpanjono Ny Fiparitahan’ny Solika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2017 15:45 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Português, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jiona 2007 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Dimampolo sy telonjato litatra ny solitany raraka tao Bahia San Vicente ao Talcahuano. Araka ny fanazavan'ny Ecologia y Patrañas Diversas (ES), nitranga ny fiparitahana raha nampiditra solika ho an'ny Orinasam-panjakana, Enap ny sambo New Constellation teo ambany fanevan'ny Nosy Marshall izay ampiasain'ny Ultramar. Nitranga tamin'ny 25 Mey ny loza.
Mba hahatakarana hoe iza no tompon'andraikitra tamin'ny loza, manadihady ny raharaha ny Biraon'ny mpampanoa lalàna. Nilaza ny gazety an-tserasera, El Ciudadano (ES) fa noho ny fivakisana teo amin'ny fantsona tao amin'ny Enap, Orinasam-panjakana misahana ny Solitany no nahatonga ny loza. Mandritra izany fotoana izany, manavotra, manarina, manadio sy mamindra toerana ireo biby ho any amin'ny faritra azo antoka ny SAG (Sampana misahana ny Fambolena sy Fiompiana). Maherin'ny 200 ireo vorona tsaboina ao amin'io toerana io ihany.
Ny tontolo iainana sy ny mpanjono ao amin'ilay faritra no tena voakasika. Araka ny fanazavan'i Sergio Leiva (ES), nanakarama mpanjono 50 ny orinasa Enap mba hanampy amin'ny asa fanadiovana ny faritra, satria tsy afaka miasa (manjono) ireo mpanjono ireo. Hatramin'izao, voalaza fa 85% ny faritra no efa voadio amin'izao fotoana izao. Namolavola drafitra hamerenana ny solika sy hametrahana sakana hampihenana ny fahasimbana ny manampahefana ao amin'ny seranan-tsambo. Nanoratra i Mauricio Barrientos (ES) fa haharitra 15 taona ny fahavoazana. Ary koa, misy vondrona mpianatra maromaro manampy amin'ny fanadiovana ny faritra.